LAHATSARY: Fahatsiarovana Ny Fandroahana Tamin-Kerisetra Ny Vondrom-Piarahamonina Pinheirinho Tao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2014 11:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Español, Français, Português
Dikasary avy amin'ny tranonkala SomosTodosOFilme.com
Roa taona taorian'ny fandroahana tamin-kerisetra ny vondrom-piarahamonina Pinheirinho tao an-tanànan'i São José dos Campos ao amin'ny fanjakan'i São Paulo, Brezila, navoaka tety anaty aterineto ny fanadihadiana fohy “Somos Todos“(Isika no Rehetra), izay manangona ireo fijoroana vavolombelona avy amin'ireo mpikatroka mafàna fo tafiditra ao anatin'ilay hetsika no sady koa niharany. Nanjary fantatra tamin'ny anarana hoe Massacre of Pinheirinho / Vonomoka tao Pinheirinho ilay fandroahana.
Ny famintinana ilay lahatsary ao amin'ny YouTube dia mivaky toy izao :
Tamin'ny enina ora maraina tamin'izay, Janoary 2012, fony nanomboka nitomany ireo olona 8.000 raiki-tahotra. Tsy ho toeram-ponenana intsony ho an'ireo izay nanorina azy valo taona lasa izay i Pinheirinho. Manome endrika ireo Pinheirenses ny Somos Todos sady manome feo ny hirifirin'ireo izay mbola miandry vahaolana hatramin'ny anio, mikasika ny ho famerenana ny fananany, izay feno zava-mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna sy ny maha-olona.
Taona iray taorian'ilay fandroahana dia nalefa nojerena tao Recife ilay fanadihadiana tamin'ny Janoary 2013, ary im-betsaka nahazo maripankasitrahana taminà fetibe samihafa, isan'ireny ny Visões Periférias tao Rio de Janeiro tao anatin'ny sokajy Sisintany Tsy Hita Maso (Imaginary Borders) sy ny “Porta Curtas”, loka avy amin'ny mpitsara. Azo jerena amin'ny endriny feno ankehitriny ny “Somos Todos” ao amin'ny YouTube na ny tranonkalan'ilay tetikasa.
Araka ny tenin'i Bruna Monteiro sy Nathália Dielú, mpanatontosa sy mpamokatra ilay horonantsary :
Betsaka ny zavatra niova taorian'i Pinheirinho, mikasika anay. Nitombo nalaky be izahay taorian'ny nihainoanay ireo Pinheirenses, taorian'ny nahatsapanay azy. Ankehitriny, mijery ny manodidina anay amin-kery izahay, amin'ny finiavana misimisy kokoa hanova zavatra. Mijery ny tolonay manokana amin'ny fomba fijery hafa, matotra kokoa ihany koa izahay. Rava ireo trano tao Pinheirinho. Tsy toy izany ny nofinofin'ireo Pinheirenses. Ary ahoana moa izahay no hampangiana ny tenanay raha toa manova fiainana ireo nofinofy goavana, manova ny tontolo? Izahay, Bruna Monteiro sy Nathália Dielú, dia samy nanoratra ireo lahatsoratra izay vao avy novakianao teo. Tsy nanao tafatafa tany anatin'ireny trano fialofana ireny izahay, na tany aminà fikambanana. Izany zotra izany no arahanay dia noho ny faniriana tsotra sy mitambesatra te-hanatanteraka azy manjohy anay. Tsy ao Pinheirinho any São José dos Campos irery ihany, fa any amin'ny hafa maro izay akaiky sy tratry ny masonay. Nahomby fotsiny izao izahay satria misy ireo olona tena miavaka nanampy anay tamin'ity iraka iray ity. Teraka avy amin'ny nofinofy ity tranonkala ity, iray izay hanaitra ny fanahin'ny olona, hahatsiahy an'i Pinheirinho ho toy ny ampahan-tantara ratsy tsy azo avela fotsiny amin'izao. Tsy ho ianao, na ho izahay
Topazo maso ny lahatsary fampahafantarana azy eto ambany:
Jereo koa ny fandrakofana manokana an'ilay fandroahana, tatitra nataon'ny Global Voices, amin'ny teny Anglisy: